Sidan aan horey u sheegnay, Xasan Sh. oo baxay - Caasimada Online
Home Warar Sidan aan horey u sheegnay, Xasan Sh. oo baxay
Sidan aan horey u sheegnay, Xasan Sh. oo baxay
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u amba baxay dalak Koonfur Afrika, halkaasi oo dhawaan uu ka furmi doono shirka hogaamiyeyaasha Midowga Afrika.
Caasimada Online ayaa xogta socdaalka Xasan Sheekh sii shaacisay laba maalmood ka hor. Halkan ka aqri